Solitaire, Pinda uye unakirwe kubva kuEmulator.Online
Kusurukirwa Ndicho kadhi mutambo wemunhu mumwe. Sezvo mutambo uchiridzwa wega, chinangwa chikuru hachisi chekurova anopikisa, asi kugadzirisa mutambo, kudzidzisa kufunga kwako zvine musoro, uye dzimwe nguva unotoshandiswa kufungisisa.
Solitaire: Maitiro ekutamba nhanho nhanho? 🙂
Kugadzira a Kusurukirwa online mahara, iwe unongofanirwa kudaro tevera iyi rairo nhanho nhanho:
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye iwe unogona kutanga kusarudza iyo solitaire yaunofarira zvakanyanya. Unogona kusarudza kuoma kunokodzera nhanho yako yekutamba.
Mushure mekusarudza iyoIwe unogona zvakare kusarudza iyo nhamba yezvidimbu iyo iyo pikicha ichave iine.
4 nhanho. Tora kubvisa makadhi ese kubva kumutambo kuenda kuWin. Kune izvi iwe unofanirwa kuisa aya makadhi mune akati wandei madheki emakadhi eMuvara mumwe chete uye zvakarongeka.
5 nhanho. Mushure mekupedza mutambo, tinya "Tangazve" Kugadzira imwe solitaire
Chii chinonzi Solitaire? 😀
Kusurukirwa (inonziwo solitaire kana solitaire muchiFrench) mutambo wekadhi wemunhu mumwe chete. Iyo dudziro kubva kuFrance inoratidza chaizvo chaizvo zvazviri. Yakadudzirwa, zvinoreva "moyo murefu". Mhando dzakasiyana dzemadhongi dzinogona kushandiswa kutamba solitaire, ese ari ma Spanish mallet Chemhondoro iyo poker.
Pane mhando dzakasiyana yesolitaire iyo inotibvumidza isu kuve nemazano mazhinji ekunakidzwa.
Chimwe chezvikonzero zvikuru chekubudirira kwayo kunoenderana nemukana wekutamba munhu mumwe chete, pasina anokwikwidza. Kuigadzira mutambo wakakwana kuzorora uye kufungisisa.
Solitaire Nyaya 🤓
Kusurukirwa ndeye zita remhando dzakasiyana dzemitambo yemakadhi. Mutambo unozivikanwa pakati pavo unozivikanwa se "Classic solitaireKwakatangira mutambo uyu hakuzivikanwe, asi kurongeka kwemakadhi kunobva kumakadhi e tarot ayo aishandiswa kushopera. Pakupera kwezana reXNUMXth, mutambo wakataurwa kekutanga muNorth Europe, uye mutambo wakatora ku France mukutanga kwezana ramakore rechiXNUMX.
Napoleon Bonaparte anonzi aigara achitamba solitaire panguva yaakatapwa kuSaint Helena muna 1816. Mumakore akatevera, mutambo uyu wakava mutambo wakakurumbira muFrance uye wakazopedzisira wakunda pasi rose, kusanganisira Germany. Mazwi mazhinji ega (semuenzaniso, "bhokisi") anobva kuFrance.
Kunyangwe nanhasi, uyu mutambo wakakurumbira uchiri chinhu chinozivikanwa kutandadza kune vanhu vazhinji. Zvese zvaunoda ndeimwe dhizaini yemakadhi, yakatwasuka pamusoro, uye mimwe mitemo yakapusa. Saka chaizvo munhu wese anogona kutamba mutambo uyu.
Anosurukirwa ari chimiro chakareruka chevaraidzo kubva panguva iyo vanhu vachiri nenguva uye nyika yanga isati yamhanya kudaro. Izvo hazvina basa kana iwe uchiridza iyo yakasarudzika nzira (nemaoko) kana pakombuta nyowani - inodzikamisa uye inodzidzisa pfungwa dzako uye inozivikanwa kwazvo nhasi kupfuura nakare kose!
Nhoroondo yemitambo yesolitaire pakombuta
Mushure mekunge PC yekutanga yawanikwa pamusika, yaingova nhanho inonzwisisika yekuridza dhijitari vhezheni yesolitaire pairi. Sezvo kutamba makadhi pachiratidziro kunoda zvishoma kadiki kadiki simba, nhamba huru yemitambo yakaonekwa munguva pfupi. Munguva yeMS-DOS, mitambo mizhinji yaive-yakanyorwa uye yakanangidzirwa kune mumwe mutambi chete.
Nekudaro, makomputa akawedzera kukurumidza uye kuwanda mazuva ano, nekudaro achivandudza mikana yakajeka yemitambo. Iyo yakawedzera ndangariro kugona zvakare yakabvumidza mapurogiramu kuti akwanise mitambo yakawanda muchirongwa chimwe chete. Aya ndiwo marongero akazara emitambo yesolitaire akagadzirwa.
Yekutanga yekutengesa kuunganidzwa yaive "Solitaire royaleYakanga yakanyorwa naBrad Fregger uye yakaburitswa naSpectrum Holobyte muna 1987. Mutambo wacho waive wakakodzera maPC ese (MS-DOS) neMacintosh.Yaive nemhando dzakasiyana sere, yakamhanya iine gumi nematanhatu mavara eEGA, uye yaishandiswa mbeva.
Makore mashoma gare gare, muna 1992, QQP (Quantum Yemhando Zvigadzirwa) yakatanga chirongwa chakakura chinonzi "Rwendo rwaSolitaireMutambo uyu wakaburitswawo weMS-DOS uye waive nenhamba inodedera yemakumi mashanu akasiyana emitambo, pamwe neakawanda manhamba emutambo wega wega! Vatambi vanogona kusarudza mimwe mitambo kwete kungoronga zvavo nzendo (nzendo), asi zvakare tora chikamu mumamishini (quests) uye uwane mamwe mapoinzi ipapo mushure mekuhwina mashoma mashoma.
Microsoft Windows Solitaire Yakatanga kuoneka muWindows 3.0 muna 1990. Muna 1995, Windows 95 yakaburitsa mutambo weFreecell. Freecell yakave inozivikanwa kwazvo pasina nguva, uye nhamba huru yemamwe shareware shanduro dzemutambo dzakaonekwa. Pakupedzisira, Solitaire yakaonekwa padivi peMicrosoft XP Spider'
Nhasi, mitambo inowanikwa kune ese mapuratifomu anofungidzirwa, kusanganisira mapiritsi uye mafoni. Kwese kwaunenge uri, panogara paine musiyano we solitaire inowanikwa yekuzorora uye kunakirwa!
Maitiro ekutamba solitaire: Matipi ♥ ️ ♠ ️ ♣ ️
Zano 1: Kutanga shanda nemakadhi esolitaire pazasi
Solo, iwe unofanirwa kushandisa anotevera makadhi, nekuti aya masaga anoda kutanga adururwa.
Ona kana uchigona kuisa makadhi anotevera pamusoro peumwe neumwe. Kana iwe ukakwanisa kufambisa makadhi akawanda kamwechete, iwe unofanirwa kushandisa murwi nemakadhi mashoma kwazvo segwara.. Nenzira iyi iwe unowana chinokurumidza chisina chinhu chigaro pasi.
Ipapo unogona kukurumidza kuzadza nzvimbo dzisina chinhu zvakare. Chete vhura chepamusoro stack kana iwe usingakwanise kuita imwe kufamba pasi.
Zano 2: imwe neimwe ace inofanira kusimudza nekukasira
Rangarira kutamisa maAES nekukasira.
Izvi zvinonyanya kuitika kune maAce ari mune imwe yemirwi yepasi. Iwe unovasundidzira neruoko rwako mune imwe yemahara nzvimbo. Neimwe nzira, tinya kaviri iyo ace.
Iwe unofanirwa zvakare kufambisa maaces padutu repamusoro ipapo ipapo. Naizvozvo, iwe unogona kuve nemukana wekufambisa mamwe makadhi kubva kune imwe yemirwi yepasi.
Zano 3: isa iye oga Mambo munzvimbo yemahara
Shanda mabhatiri sezvaunogona. Unoda clearance yemadzimambo.
Kana ndangowana nzvimbo yemahara, ndinofanira kurizadza namambo. Wobva waisa mamwe makadhi ese akateedzana. Nenzira iyi unogona kuisa pasi mavara gare gare.
Kana iwe uchigona kusarudza pakati pemadzimambo maviri, iwe unofanirwa kuteerera kune iro vara raunogona kurongedza akawanda emakadhi.
Izvo zvinoshandawo kune maviri emahara mavara. Zvakanaka zadza izvi namambo mutema uye kamwe namambo mutsvuku. Izvi zvinowedzera mukana wekugona kutamba makadhi akawanda panguva imwe chete.
Zano 4: chinja makadhi
Kana iwe usisakwanise kuita mafambiro kana kana pasina chinoratidzika kunge chine musoro kwauri, unofanirwa kuchinja.
Tarisa makadhi acho uye chinja pakati pawo kuitira kuti ugone kuisa mamwe makadhi pamusoro.
Shanduko yakakosha uye kazhinji ndiyo chete nzira yekugona mutambo.
Kana iwe usisiri kuona zvimwe zvitima, tinya pane chinhu "Zano"mumenu
Mhando dzeSolitaire 🃏
Kune misiyano yakati wandei yesolitaire, iyo inoda zvinopfuura imwechete dhizaini uye akasiyana hunyanzvi mazinga kubva kumutambi. Rondedzero iripazasi inovhara akasiyana marudzi esolitaire, kubva kune yakasarudzika Klondike uye Spider kune mitambo inoda kumhanyisa kana, yevasikana, mutambo kwaunofanirwa kukumbira makadhi uye kupfeka imwe neimwe modhi.
Iwo chaiwo echinyakare! Ronga makadhi Ace kuna King, uchiaparadzanisa zvinoenderana nesutu. Kuti uite izvi, paradzanisa makadhi aya mumakoramu mukukwira kurongeka, uchigara uchichinjanisa pakati pemakadhi matsvuku uye matema, kudzamara hwese hwakaziviswa. Paunowana ace, pararira kumusoro kwechidzitiro woisa mamwe makadhi esutu imwechete pairi.
Zvishoma zvakasiyana nezvapfuura, mune iyi solitaire iwe unofanirwa kuronga makadhi kubva kuna Mambo kusvika kuAce. Zvakare, iwe unongova nesutu imwe chete patafura, zvisinei iwo makadhi anodzokorora kakawanda, achikubvumidza iwe kuti uite zvinopfuura kamwe zvakateedzana.
Chinangwa chemutambo uyu ndeches bvisa piramidhi rese remakadhi, uchienzanisa iwo ari maviri maviri anowedzera kusvika pagumi nematatu chaiwo kuti avabvise pachiratidziri. Pamusoro pemakadhi akaiswa mupiramidhi, une mamwe matatu makadhi anofanirwa kushandiswa kubvisa mamwe uye kusunungura makadhi ari pazasi, pamwe neimwe nzvimbo yekuparadzanisa imwe yemakadhi.
Nzira inogona kuturikirwa se "nzira" uye inopfupisa chinangwa nema mechanics emutambo uyu zvakanaka. Iwe unofanirwa kugadzira nzira dzemakadhi, uchijoinha iwo zvinoenderana nekuverengwa kwechiso chimwe nechimwe, mukukwira kana kudzika kurongeka. Kadhi rega rega rinogona kungobatanidzwa kune akafanotungamira kana anotungamira kadhi kana kune mumwe wevaseki.
Pano unofanira kuisa makadhi ari maviri maviri anowedzera kusvika pagumi nematatu, sePiramidhi Solitaire. Paunobvisa makadhi kubva pamusoro pemurwi, makadhi anotevera anozoshandurwa, achivhura mikana mitsva yekubatanidza nemakadhi mana aunawo muruoko.
Speed ​​ndiyo yakakosha, zvirinani mumutambo uyu. Kupesana nekombuta, iwe unofanirwa kukurumidza uye kubvisa makadhi ese kubva mumurwi wako. Kuti uite izvi, isa makadhi ako mune imwe yematutu maviri ari pakati pechidzitiro, zvinoenderana nenhamba yekadhi riri pazasi, rinofanira kungove nhamba imwe chete kumusoro kana kudzika kupfuura kadhi riri patafura.
Mashiripiti Towers Solitaire
Mumwe mutambo unobata nekubviswa kwemakadhi zvinoenderana nekuverengwa kweumwe neumwe. Musiyano uripo unofanirwa kubvisa makadhi kuti usunungure imba kubva kumatura matatu pazasi, uchigara uchiona kukosha kwekadhi rakaratidzwa pasi pechiso.
Kushivirira uye fashoni pamwe chete, mumutambo unonakidza kwazvo. Iwe unofanirwa kubvisa ese makadhi ari pachiratidziro panguva imwe chete yaunopfeka imwe neimwe yemhando. Kuti utore makadhi pazasi, rongedza makadhi ane mhando yakafanana, kuwedzera mukutarisa: mamwe emamodeli ane zvavanofarira zvemavara, anodhindisa uye masitaera.
Pasina kupokana, chinonyanya kufadza pane zvese. Iwe unofanirwa kubvisa makadhi kubva pachiratidziro mubatanidzwa we Mahjong uye ndangariro mutambo- Vaise vaviri vaviri kuti vatendeutse makadhi ari pazasi uye, kuvhura makadhi ane kiyi, tsvaga makadhi ane kiyi yakaburitswa.